Xoghayaha Horumarinta Caalamka ee dowlada Britian oo caalamka ugu baqay in wax laga qabta fashilka ku dhacay Soomaliya. | Building Momentum
Xoghayaha Horumarinta Caalamka ee dowlada Britian oo caalamka ugu baqay in wax laga qabta fashilka ku dhacay Soomaliya.
Xoghayaha Horumarinta Calamka ee Britain , Andrew Mitchel oo booqasho kutegay gobollada Gedo iyo Puntland ayaa shegay in loo baahan yahay in wax badan laga qabto sababaha qarson ee wada xasiloon darada ka jirta Soomaaliya haddii la rabo in wax laga badelo xaaladda Soomaaliya oo ka sii dareysa.
Mitchel aya shegay in dadaadalkii socday labatanka sano ee la so dhaafay inuu fashilmay , waxaana lagu qasbanyahay ayuu yiri in beesha caalamka ay ku heeshiiso xeelad cusub haddi duniida calamko ay rabto in ay la tacaasho labada arrin ee kale ah salka cooladda Soomaalia iyo saameynta dhibaatada ay keenayaan ee wadanka hortaagan.
Britan ayaa kordhineysa deeqda ay ku bixiso sidi lo xalin laha arimaha hose ee saameeyay gobolka , seedexda sano ee soo socda, oo qeyb ka ah mashaariic socoto oo ay ka mid yihin sida dadaalka tababarka booliiska oo la kordhiyo, iyo sido kale in la dhiso nidaam sharci iyo in la shaqaaleyo dhalinyarada.
Mashaariicda deeqda ee loogu talagalay in wax loogu qabto xalinta cooladda gudaha iyo inn la xoojiyo booliska ayaa la filayaa in la labajibaar laga dhigo sanadka soo socda iyadoo wax badan laga qaban doono in maamulada degmooyinka ay nooqdan kuwo muujiya la xisbtan iyo in ay bixiyan adeega aasaasiga ah.
Taageerada ka sokow , waxaa Britain ay laba jibaaareysaa taageerada deeqda ee ku baxeysa in la abuuro shaqooyin , iyo horumarinta dhaqalaha iyadoo la abuuroyo 22,500 oo shaqo ah ila sanadka 2015. Waxaa la aaminsanyahay in shaqa la’aanta iyo saboolnimada oo aad u sareeya in ku qasban dhaliyarada ay nooqdaan burcad badeed, falal dambi iyo xagjrnimo.
Intuu kuguda jiray, safarkiisa oo ahaa mid xog uruurin ah ayaa Mitchel wuxuu ku dhawqay deeq cusub oo Britain ay bixineyso oo ka faideysan doonan 3.4 milyan qof oo Soomali ah, iyo maamulida hubka oo suurtagalin doonto in hub badan la qaado dariiqyada oo la geeyo saldhiyada booliska so si wanagasan loo keydiyo.
Xoghayaha aya la kulmay tababarayaasha booliska iyo shaqallaha cafimdka , si uu uga ukurgalo xaalada gudaha iyo in uu arko sida deeqda ay ugu qaban karta in ay sara u qaado xasiloonida meelaha aay ka jirto kala danbeynta iyo amni sugan. Britain waxay rajeyneysaa in haddi laga faideysto horumarka Muqdisho iyo meeelaha kale ee nabadoon ee wax weyn ay ka geysan karto xasilooni ka dhalata wadanka oo dhan.
Howlaha deeqda Britain waxay qeyb ka yihiin dadaalka caalamka ee lagu doonaayo in wax laga qabto xaaladaa Soomaaliya oo mudo dheer si xuumaaneysay, iyadoo in ka badan wakiilo ka socda 40 waddan iyo hay’ado caalami ah lagu wado in ay ka qeyb galaan shir ka dhacaya London bisha soo socotao oo looga hadli doono arimaha, macluusha, burcad badeeda iyo aragagxisada .
Iyadoo, qaar ka mid ah dadka Soomalida ay ladanyihiin oo ay heystaan dhaqaale ku filan, qaar kale ayaa waxaa si ba’an u saameysa macluul, iyadoo aan wax badan lugu bixnin aayaha Soomaaliya. In Soomaaliya ay awoodi weyso in ay ya kabato abaarahii dhawaa ayaa ah astaan weyn ee waddan fashilmay.
Mitchel ayaa ka digay malaayiin qof oo Soomaali ah ay gaajeysanyihiin sidoo kale boqolaal kun ayaa waxaa ay qarka uu saaranyihiin in ay ku haabsato macluul sanadkan haddii gargaarka uu istigaoo mise uu yaraadoo.
Xoghayaha Horumarinta calamka Britain Andrew Mitchel ayaa wuxuu shegay in Britain ay deeq gaarsiin doonto hal malyan oo qof oo Soomali ah , gargarkas oo isgu jira cunno, daawooyin iyo agabka beeraha, asago ugu baqay in waddamada calamka ay dhorkugu ay ka qaatan.
Qiyaasta ee uga dambeys a ee Qarmada Midoobey ay muujineysa in gobollada macluusha ka so baxay ee Bay, Bakool , iyo Shabeellaha hoose ay qarka uu saaran yi hiin in macluul ku habsato sanadkan 2012.
Xoghayaha Horumarinta Calamka, Andrew Mitchell, wuxuu yiri.
“ macluusha dhaweyd waxaa ay si ba’an u saameeysay gobolada koonfurta Soomaaliya iyadoo wali boqolaal ay la dhibaateysan yihiin si ay uga kaban lahaayeen qaar kale oo badan ay ku jira xeerooyinka qaxootiga. Britain waxay u grgartay dadka wakhThis paragraph is not cleartigii ugu darnaa ee sanadkii la soo dhaafay waana si wadi doonaa sanadkan anagoo cuuno, daawo iyo abuur siin doona in ka badan hal malyan oo qof’
“macluusha waxaa sababay abaar ba’an, beeca cuntada oo kordhay iyo amni daro. Xaaladaa waxaa si adkeeyay iyado Soomaaliya ay tahay waddan fashilmay. Macluul, burcadbadeyd iyo argagaxiso – intaabb ay yihiin aastamaha buurburka,
“ waxaa muhim ah la xaliyo sababahaa horo ee keenay dhibaatooyinkan. Sidaas darted ayaa waxaa Britaiin ay hormud u tahay in la helo xeeld cusub balse, waxaa loo baahan yahay in wadamada kale ee qeyb ka qaatan,”
“ waxa aan rabnaa in beesha caalamka ay ku heeshiiso xeelad cusub oo beesha calamaka ay wax ku wado, si loo hortago xaalada oo sii xumaato si shacabka Soomaaliya ay u heelaan rajo wanaagsan oo ku aadan aaayahuda,”
Maclumaad dheeeri ah
Britain waxaa sanadkan ay bixineysaa £55 malyan oo ah deeq baniaadnimo oo isugu jirta; cuno , daawoyin iyo kalmo dhanka beeraha ah. Deeqda oo la marsiin doono Hay’aadaha Qaramada Midobeey iyo hay’aadaha caalamiga ah ayaa waxaa loogu talagalay in 100 kun oo caruur soomaali ah iyo hooyooyin nafaqo daro loogu daaweeyo; iyo in sedax bilood 100 kun oo qof lagu gaarsiiyo cuuno; iyo sido kale in hal malyan oo qof ay heelan biyo nadiif ah iyo daryeel caafimaad. Iyo in 100 kun oo qof ay ka faaideystaan abuur iyo carro nafaaqeyo iyo mashruuc dadka lacag lagu siiyo shaqooyin ay qabtaan.
££20m waxaa lagu horumarinayaa daryeel caafimaad ee la siiyo hooyooyinka iyo carurata Soomaaliya, si ay diyaar ugu nooqdaan in ay la tacaalaan dhibaatooyinka caafimaad iyo nafaqada oo soo if baxay marka ay jirto muusiibo wakhti walba.
Mr. Mitchell ayaa wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay in UK ay bixineyso deeq cusub oo la siinayo Mines Action Group, oo uu arkay shaqaada ay qaabanayan oo lagu saraaya miinada iyo walxaha qarxa oo ka haray colaada.
Shirka Soomaaliya wuxuu ka dhacayaa aqalka Lancaster taariikhda marka ay tahay 23da febraayo 2012. Rai’sul wasaaraha Britain ayaa wuxuu casuumayaa ergo sare oo ka imaanaya in ka badan 40 waddan iyo hay’adaha caalamiga ah. Shirka ayaa waxaa ulajeeda laga leeyahay ay tahay in la is ku afgarto qodobo muhiim ah oo Soomaaliya lagu taageeraayo todobo qodob oo kale ah; amniga, geedi-socodka siyaasadda,la dalagaanka argagaxisada, burcad badeeda, amniga goboladda, samafalka iyo xiiriika calamiga ah.
Deeqda Hay aada horumarinta Calamka ee DFID waxaa loogu talagaly in lagu taageero sidii loo heli lahaa xasilooni joogta ah iyo in si toos ah wax looga badalo noolasha dadka saboolka ah ee Soomaliya. Mashaariicda oo ka kooban afar qeyb: a)dowladd wanaaga iyo dhisidda nabadda b) abuurida shaqooyin iyo maalka c) Daryeel caafimaad oo la siiyo hooyooyinka iyo caruurta d) gargaarka binaadamnimo. Ka shaqeynta arimaha kala duwan ee koor ku xusan waxan kaloon u jeednaa in xaliyo saameynta baniaadamnimo oo colaadda ay keentay iyo sido kale in la taageero xasilooni darida ka jirta degmooyinka iyo gobollada iyadoo loo suurtagalinaya bulshada in ay gacanta ku qabato arimaha khuseeya iyadoo la abuuraya shaqooyin iyo in hooyoyinka iyo caruurta ay heelan daryel caafimad. Waxaa sido kale aan dirigaleyneynaa masuuliyiinta Soomaalida heer walbo in ay suurtagaliyaan in dadka ay heelaan wax ay uga kaftoomaan milishyadka , iyo in la dhiso dowladda hoose oo la is ku racsanyahay iyo siyaaba laghu xaaliya muuranka iyo is mandhafka.
Waxaan Soomaaliya uga deeqeynaa ku dhawaad £69 malyan sanadkiiba ila iyo 2015.
Deeqaha Britain waxaa ay gaarayaan daad ku dhaqan Geeska Afrika oo dhan iyado 2. 4 malyan oo qof ay helayaan cuuno, 1.3 malyan ayaa looga talagalay jadeeco iyo 680,000 kun oo looga talaalay cudurka dabeysha qaba. Gudaha Soomaliya , waxaa lagu qeybiyay in ka badan 400,000 kun oo ah qiyaasta daawada hal mar la qaato ee loogu hortago cudurka duumada.
Waxaan Soomaaliya uga deeqeynaa ku dhawaad £69 milyan sanadkiiba ila iyo 2015.
Deeqaha Britain waxaa ay gaarayaan daad ku dhaqan Geeska Afrika oo dhan iyado 2. 4 malyan oo qof ay helayaan cuuno, 1.3 malyan ayaa laga talaalay jadeeco iyo 680,000 kun oo laga talaalay cudurka dabeysha. Gudaha Soomaliya , waxaa lagu qeybiyay in ka badan 400,000 kun oo ah qiyaasta daawada hal mar la qaato ee loogu hortago cudurka duumada.
One thought on “Xoghayaha Horumarinta Caalamka ee dowlada Britian oo caalamka ugu baqay in wax laga qabta fashilka ku dhacay Soomaliya.”
DEG DEG : Andrew Mitchell oo Soo Gaaray magaalada Garoowe
Garoowe[Moment Media] Wasiirka Iskaashiga iyo Horumarinta Caalamiga ah ee dalka Britain Andre Mitchell. iyo xubno uu hoggaaminayo oo uu kamid yahay Safiirka DKMG ah u fadhiya dalka Britain,Saxafiyiin BBC-da ka socday ayaa maanta soo gaaray magaalada Garoowe ee xarunta Puntland.
Xukuumada Puntland xubno kamid iyo dadweynaha magaalada Garoowe oo boqolaal gaarayey ayaa si weyn ugu soo dhaweeyey Wasiirka Iskaashiga iyo Horumarinta Caalamiga ah ee dalka Britain Andre Mitchell iyo Wafdigiisa,waxaana loo soo galbiyey guriga Madaxtooyada ee magaalada Garoowe.
Madaxweyne Kuxigeenka Dawladda Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha Puntland Cabdisamad Cali Shire iyo Wasiirka Iskaashiga iyo Horumarinta Caalamiga ah ee dalka Britain Andre Mitchell ayaa kulan qaatay 1-saac ku yeeshay guriga Madaxtooyada ee Garoowe.
Kulnka ka dib ayey Shir Jaraa’id u qabteen Warbaahinta Madaxweyne Kuxigeenka Dawladda Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha Puntland Cabdisamad Cali Shire iyo Andre Mitchele,waxaana ay faah- faahin ka biixiyeen arrimihii ugu muhiimsanaa ee ay kawada hadleen.
Gen. Cabdisamasad Cali Shire ayaa sheegay in ay kawada hadleen Andre Mitchell arrimo ay kamid yihiin Shirka Soomaalida loo qabanayo ee dalka Ingiriiska lagu qabanayo,Roadmap-ka,Burcadbadeeda iyo Barnaamij dhanka mashaariicda ah sida Waxbarshada,Caafimaadka iyo kuwa kale.
….”Waxaa faxad weyn noo ah in maanta booqasho rasmi ah noogu yimid Wasiirka Iskaashiga iyo Horumarinta Caalamiga ah ee dalka Britain Andre Mitchell iyo Wefdi balaaran oo u hoggaaminayo halkakan oo aanu kulan kula yeelanay runtiina kulkaas si fiican ayaanu isugu afgaranay arrimo dhowr ahna waanu isla soo qaadnay ha ahaato arrimo khuseeya Dawladda Puntland deeqaya ay dawlada Ingiriisku siinayso Puntland ama Burcadbadeeda wixii laga qabanayo ama nabadgelyada guud waxbadan baanu iska niri ,waxaan kaloo isla soo qaadnay Shirka landon lagu qabanayo bisha soo socota kaasoo la filayo in uu noqdo kii soo gabagabeyn lahaa dhibaatadii Soomaaliyeed…“ayuu yiri Gen. Cabdisamad.
Wasiirka Iskaashiga iyo Horumarinta Caalamiga ah ee dalka Britain Andre Mitchell oo isna dhankiisa la hadlay Warbaahinta ayaa tilmaamay in uu si weyn ugu faraxasanyahay in aan noqdo Wasiirkii ugu horeeyye ee ka socda dawlada Ingiriiska oo booqasho rasmi ah kuyimaada deegaanada Puntland .
Sidoo kale waxa uu sheegay in ay kawada hadleen Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Gen. Cabdisamad Cali Shire shirka lagu qabanayo landon ee looga arrinsanayo dhibaatada ka jirta Soomaaliya,Roadmap-ka ,barnaamij mashaariiceed oo ay gacanta ku hayso dawlada Ingiriiska oo ay Puntland ka wado iyo sidii loola dagaalami lahaa kooxaha Burcadbadeeda Soomaalida.
Andre Mitchell iyo Xubnaha Wafdigiisa ayaa kormeer kusoo sameeyey Cisbitaalka Garoowe,Suuqa weyn ee magaalada Garoowe iyo Saldhiga Booliska ee degmada,waxaana la filayaa in saacadaha soo socda uu dib uga duulayo magaalada Garoowe ee xarunta Puntland.